अत्यधिक उत्तेजनाले गयो ज्यान, मृत्युपछि पनि उत्तेजित !::Pathivara News
काठमाडौं, पुस अत्यधिक यौन उत्तेजना थाम्न नसकेर नाइजेरियामा एक व्यक्तिको मृत्यू भएको छ । मृत्यूपछि पनि उनको लिंग उत्तेजित अवस्थामा रहेको त्यहाँका मिडियाले जनाएका छन् ।
शिर्षक सँग समन्धित समाचार अझ प्रष्ट सँग सिधै भिडियोमा हेर्न चाहनु हुन्छ भने तलको फोटोमा क्लिक गर्नुहोला ! र भिडियो नहेरी छापाको पुरै समाचार पढ्न चाहनुहुन्छ भने अलि तल सार्नु होला !
मृतकको परिवारले अहिलेसम्म कुनै उजुरी नगरेकाले प्रहरीले यस घटना सम्वन्धमा अनुसन्धान अघि बढाएको छैन । -अनलाइन खबरबाट